Home » Lahatsoratra farany farany » Tourism » Nanjavona ny Lake Powell: Mampalahelo tokoa ny fizahan-tany!
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • fanorenana • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny fanovana ny toetrandro dia nanjary zava-misy ary olana lehibe ho an'ny indostrian'ny fizahantany ao amin'ny Lake Powell, iray amin'ireo faritra fialantsasatra malaza indrindra any Arizona sy Utah, Etazonia.
Ny fiovan'ny toetr'andro dia nanjary tena izy tany Arizona sy Utah ary nisedra olana ny Lake Powell
Any amin'ny farihin'i Powell dia nidina ho any amin'ny toerana ambany manan-tantara ny fantson-drano, ary nitondra takaitra be tamin'ny indostria teo an-toerana
Lake Powell dia fitehirizan-drano nataon'olombelona amin'ny Ony Colorado ao Utah sy Arizona, Etazonia. Toerana fialan-tsasatra lehibe fitsidihan'ny olona roa tapitrisa eo ho eo isan-taona.
Mbola io no fanambarana momba ny Fizahantany Lake Powell tranonkala:
Faly izahay mandray ireo vahiny hiverina any amin'ny Lake Powell ary manantena ny fitsidihanay izahay. Azafady mba mitady vaovao farany momba ny fanovana ny asanay sy ny serivisinay amin'izao fotoana izao rehefa manokatra izahay.
Ny fahasalaman'ny mpitsidika, ny mpiasa, ny mpilatsaka an-tsitrapo ary ny mpiara-miombon'antoka amin'ny Lake Powell no laharam-pahamehana aminay. Ny National Park Service (NPS) dia miasa manerana ny federaly, fanjakana ary tompon'andraikitra eo an-toerana mba hiantohana ny fiarovana ireo vahininay sy hanaraka ny torolàlana momba ny fahasalamana farany.
Ny toetr'andro dia miha mafana sy maina ary mitombo isan'andro ny loza ateraky ny afo. Ny mpitsidika dia tokony hampiasa fitandremana bebe kokoa amin'ny famerenana amin'ny tanim-panjakana rehefa mitombo ny loza atrehin'ny afo.
Ny fameperana ny afo dia vokatry ny fitomboan'ny loza ateraky ny afo sy ny filàna hisorohana ny doro tanety ataon'olombelona mandritra ny toetr'andro mety hampidi-doza, hampiroborobo ny fahasalamam-bahoaka sy ny fiarovana ary ny fiarovana ny enti-manana. Ny mpamono afo sy ny filaminam-bahoaka no mijanona ho lohalaharana indrindra mandritra ny vanim-potoana mirehitra.
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny fameperana ny afo amin'ny tanim-panjakana hafa ao Arizona sy Utah dia tsidiho azafady www.fildland.az.gov ary wwq.utopri.com. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny doro ala manerana ny firenena dia tsidiho inciweb.nwcg.org.
Ity ny zava-misy:
Ny Lake Powell dia any avaratr'i Arizona ary mipaka hatrany atsimon'i Utah. Io dia ao amin'ny reniranon'i Colorado ao amin'ny faritra fialamboly ao Glen Canyon. Miaraka amoron-dranomasina sahabo ho 2,000 XNUMX kilaometatra, tara-masoandro tsy misy fiafarana, rano mafana, toetrandro tonga lafatra, ary ny sasany amin'ireo toerana mahavariana indrindra any andrefana, ny Lake Powell no kianja filalaovana farany. Manofa sambo an-trano, mijanona eo amin'ny tobin'ny tobintsika, na mankafy ny trano onenanay ary mitsangantsangana amin'ny dia an-tsambo.
Nanambara tampoka ny National Park Service tamin'ny voalohandohan'ity volana ity fa tsy afaka mampiasa Wahweap Launch Ramp intsony, ny tranokala be mpandeha indrindra any an-toerana. Ny sambo efa natsipy tany anaty rano dia nampandrenesina fa tsy ampy herinandro akory izy ireo hiverina an-tanety na mety ho voahitsakitsaka.
Ny tanàna kelin'ny Pejy dia misy mponina 7,500 ary raha tsy misy ny sambon-trano, ny indostrian'ny fizahantany dia tsy afaka mitazona an'io tanàna kely mavitrika io hatrany. Krizy ho an'ny vondrom-piarahamonina Pejy.
Na dia nampirongatra ny doro tanety aza ny fiovaovan'ny toetrandro, ny hafanana ary ny tondra-drano amin'izao fahavaratra izao, dia mitaky be ihany koa ny indostrian'ny fizahantany miankina amin'ny Lake Powell. Ny herinandro lasa teo dia nahatratra ny haavo manan-tantara 3,554ft ny fantson-drano, haavony izay mbola tsy tazana hatramin'ny 1969 rehefa fenoina ny fitahirizana. Ny tahirin-drano goavambe izao dia tsy manan-kery intsony ny telovolana telo ary tsy hiala amin'ny faran'ny lohataona ho avy izao farafaharatsiny noho ny haavon'ny ranomandry ambany ao amin'ny fantsakan'ny Reniranon'i Colorado.
Amin'ireo tady fitateram-bahoaka fito ao amin'ny Lake Powell, Bullfrog any atsimon'i Utah ihany no mijanona miasa azo antoka noho ireo andiana fanitarana vao haingana. Saingy io koa dia mety hanjary tsy ho tafiditra intsony.
Araka ny tatitra iray tao amin'ny taratasy Guardian monina any UK, ny Birao amerikana fanarenana amerikana dia maminavina fa mety hanana 79% Lake Powell hihena 29ft hafa avy amin'ny ambany ambany ankehitriny "amin'ny taona ho avy".
Araka ny tatitry ny National Park Service, Glen Canyon dia nahitana mpitsidika 4.4 tapitrisa tamin'ny taona 2019, ary izy io dia iray amin'ireo valan-javaboary be mpitsidika indrindra teto amin'ny firenena. Nandany 427 tapitrisa dolara ny mpitsidika tamin'ny pejy sy ny manodidina ary nanohana asa 5,243 XNUMX, ao anatin'izany ny fanomezana loharanom-asa lehibe ho an'ny Navajo Nation eo akaiky eo.
Betsaka ny fahafaha-manao fialamboly hafa any amin'ireo hadilanana mivoaka avy ao amin'ny Lake Powell.
Manaiky ny indostrian'ny sambo fa manintona lehibe ireo mpizahatany ireo faritra kanto vao tafiditra any Glen Canyon.